I-Las Flores Getaway
El Cuco, San Miguel Department, i-El Salvador
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Lissette
U-Lissette unokuphawula okungu-22 kwezinye izindawo.
Itholakala ngezinyathelo ezisuka kude ne-surf ehamba phambili e-Central America, i-Alma iyigugu eliyimfihlo elibekwe kude. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukubaleka kwezothando noma ukuzijabulisa komndeni wonke, indawo yethu iyindawo ekahle yokuphumula.
Thulisa umoya wakho. Hamba nathi.
Indawo yethu iyimfihlo ngokuphelele. Sizungezwe izintaba namahlathi, futhi ibanga elingamazinyathelo angu-300 indawo yokungena kokunye okuhamba phambili kwama-surf emhlabeni.
Igumbi lakho linombhede ongusayizi wendlovukazi, ibhavu langasese kanye nevulandi yangasese.
Wamukelekile ukusebenzisa ikhishi lethu ukuze ulungise ukudla noma uphathe iziphuzo ukuze uhlale ubanda.
Ichibi linezihlalo nxazonke zokuphumula, futhi kukhona izindawo zokuhlala eziningi endaweni yethu ukuze sibe nesikhathi sodwa. Kukhona indawo yokudlela enkulu, ithala elikhulu lokubuka uphahla lwe-360 degree, kanye nezindawo zokupaka ezanele.
Asizivumeli izivakashi zosuku futhi sinamagumbi angu-6 kuphela.
Hamba wehlele ogwini ukuze ujabulele ilanga elifudumele lase-Salvador namagagasi alo amahle.
Sitholakala endaweni yokuqala yokusefa. Lesi sigodi esincane sokuntweza emanzini siyikhaya lamagagasi amahle kakhulu emhlabeni. Ukuvuvukala kwaseNingizimu kusho ikhefu lamaphuzu angakwesokudla angamayadi angama-300. Uhambo lwesikebhe oluya ePunta Mango lutholakala kalula. Kunezindawo zokudlela ezimbalwa eduze kwamanye amahhotela. Sikude ngamagxathu angu-300 emnyango wolwandle womphakathi. Umgwaqo oyitiyela uphephe kakhulu, futhi omakhelwane bethu banobungane kakhulu.
U-Yuri & Melvin bakhona ukuze bakubingelele futhi baphendule noma yimiphi imibuzo. Bazohlala bekhona endaweni ukuze baqinisekise ukuthi uyakujabulela ukuhlala kwakho, futhi baqinisekise ukuthi izinto zihamba kahle.